အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 192
သားပျောက်အမေတစ်ယောက်၏ ရင်ဖွင့်သံ (ဒေါ်ပေါရွှေ) ရိုက်ကူးတင်ဆက် – အရှင်ပညာနန္ဒ (ပြည်ပရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့)၊ နယူးယောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – ခေတ်ပေါ် စစ်ချီသီချင်းသစ်၊ ကာရာအိုကီဗားရှင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဂဠုန်နီဆရာတော်၏ လက်ပံတောင်းတောင် အရေး အပေါ် သဘောထား မိုးမခ ရုပ်သံ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းအကြမးဖက်ဖြိုခွဲမှုနှင့်ပက်သက်ပြီး မန္တလေးမြို့၊မဟာဓမ္မိကာရာမကျောင်းတိုက်၊ငွေငါးကျောင်း၊ ဂဠုန်နီဆရာတော် ဦးကာဝိယ၏ သဘောထားအမြင် အရှင်ပညာနန္ဒ (ပြည်ပရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊ နယူးယောက်) မှ တဆင့် ရယူသည်။ > Tags: လက်ပံတောင်းတောင် Related posts ကြံ့ဖွံ့အစုိုးရက လက်ပံတောင်းတောင်သံဃာတွေကို တိုက်ရိုက်တောင်းပန်ဟု ဆို (0) ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များကို ရွှေည၀ါဆရာတော်က အသိအမှတ်ပြုစကားပြောကြား (0) သလ္လာဝတီတိုင်းသတင်းစာမျက်နှာနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်တွေကပြောတဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှုအပြီး မြင်ကွင်း (1) လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ရွှေဝါရောင်အရေးတော်ပုံ သီချင်း ခေတ်မီနေဆဲ (1) လက်ပံတောင်းတောင်အကြမ်းဖက်မှုက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ရဟန်းရှင်လူများ ပြောကြားချက် (2)
ကာတွန်း စောငို – တောင်းပန်လိုက်၊ ခွင့်လွှတ်လိုက်၊ ပုံ … အမိန့်အရ ၀န်ကြီး ဒီဇင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း စောငို – တရုတ်ကျေးဇူး ဆပ်ဖူးပြီလား
ကာတွန်း စောငို – တရုတ်ကျေးဇူး ဆပ်ဖူးပြီလား ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၀၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းစောငို – နောက်ကြောင်းမလှည့်ဘူး၊ နောင်လာ နောက်သားတွေ အလှည့်ပေးရဦးမှာ မို့လို့ ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 192 of 199«1...190191192193194...199»